Vatengesi veManyowani uye Fekitori - China Chinyorwa Vagadziri
15 mu 1 Combo Heat Press Machine
15 mu1 combo ndiyo inodhura-inoshanda kupisa muchina wekudhinda, inogona kuendesa mafoto, mazwi pane donje, fiber, simbi, mabhegi, mbeva mamati, mapuzzle, mataira, mahwendefa, girazi uye zvichingodaro, yakakodzera kuburitsa chipo, kushambadza uye zvimwe zvakawanda zvakasarudzika & zvinonakidza zvinhu. Shandisa muchina uyu kugadzira mineti yekupedzisira yenguo yeHalloween kana shati yeHalloween uye kugadzira hembe yeKisimusi.
Dhijitari Kapu Heat Press Machine
Iyi inguva nyowani yenguwani ngowani yekudhinda yekudhinda muchina nekambani yedu. Iyi yekudhindira inoitirwa zvese zvekutengeserana uye zvekushandisa pamba. Inogona kukwanisa kuisa kuchinjisa, tsamba, nhamba uye mifananidzo pane cap, baseball ngowani uye chero zvimwe zvinhu. Muchina uyu une chitarisiko chekunze chakanaka nehunyanzvi hwekugadzira. Uye iye zvino ndiwo muchina wepamberi mumusika wekupisa wokudhinda. Muchina wekupisa uyu unochengetedza nzvimbo. Ichaburitsa mhedzisiro inofadza mumaminetsi mashoma uye uchafadzwa neyeuko nguva dzese dzaunoshandisa.